Koety: Tifi-Basilava Atao Amin’ny Mpanao Fihetsiketsehana Tsy Mizaka Zom-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2012 2:15 GMT
Nanapa-kevitra ny hanao fihetsikatsehana amin'ny fitakiana fizakàna zom-pirenena mandritra ny andron'ny tsy fampiasana herisetra iraisampirenena amin'ny 2 Oktobra 2012) ny vondrom-piarahamonina tsy manana fanjakana mpiahy. Nanao fihetsiketsehana tsindraindray [an-tserasera sy andavanandro] ny vondro-piarahamonina hatramin'ny Febroary 2011. Tao anatin'izay roa taona izay dia efa nisambotra mpanao fihetsiketsehana mihoatra ny 200, namorona fiampangana hanamelohana azy ireo, nefa nanafaka azy ireo madiodio ny mpilaza tena ho ‘demokrasian'ny Helodrano’.
Ny Talata teo ary, hafa ny fihetsiketsehana tamin'ity indray mitoraka ity satria nahazo mpanao fihetsiketsehana, fampitam-baovao vahiny sy fikambanana tsy miankina maro ny hetsika.
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy manko izay dia vitsy kokoa ireo mpanao fihetsiketsehana, raha oharina amin'ireo 120.000 eo ho eo amin'ny vahoaka koesiana sahabo ho 3 tapitrisa. Bedoon izay adika hoe ivelany [tsy manana], izay ilazana ireo Koesiana tsy manana antonta-taratasy ofisialy tahaka ny pasipaoro na kara-panondro.
Araka ny Bedoon Rights, nampiasa bala fingotra, baomba mandatsa-dranomaso, baomban-tsetroka, baomba mankarenin-tsofina ary sambany nampiasa basy lava ny mpitandro ny filaminana. Vaovao voamarina no milaza fa voatifitra eo amin'ny masony i Abdulatif Al-Nabhan ary kely ihany ny vintana hamonjena azy amin'izao fotoana izao. Indreto sary samihafa navoakan'ny mpisera Bedoon sy Koesiana :
Sarina mpitandro ny filaminana mikendry mpanao fihetsiketsehana amin'ny alalan'ny basy lava
Iray amin'ny mpanao fihetsiketsehana Bedoon voasambotra (navoakan'i @Mohd_AlSalem)
Sary samihafa avy amin'ny bala fingotra (navoakan'i @YaqoobAbdualla)
Iray amin'ny sora-baventy nijoro nandritra ny fihetsiketsehana (navoakan'i @Mohd_AlSalem)
kapoakan-tsetroka sy bala fingotra (navoakan'i @HAlshammri)
mpanao fihetsiketsehana Bedoon maratra eo amin'ny lohany (navoakan'i @FawazFarhan)
Sarina fitaovam-piadiana andarohana baomba mandatsa-dranomaso ny mpanao fihetsiketsehana (navoakan'i @Montheralhabeeb)
Mpikatroka Koesiana Pro-bedoon Al-Khaldi voasambotra (navoakan'i @faisalalmana)
Bala fingotra nitifirana mpanao fihetsiketsehana (navoakan'i @AleradaNews)
Ity lahatsary (navoakan'i 7MGAN) ity mamatratra anatin'ny 15 minitra ny fihetseiketsehan'ny Bedoon:
Ho valin'ny tsikera, namoaka fanambarana manameloka ny Bedoon ho tahaka izao ny minisiteran'ny atitany ny talata alina teo :
1- Manelingelina ny asan'ny Fitsikilovana amin'ny alalan'ny fitaovam-pampitam-baovao sy miampanga lainga ny fitondram-panjakana 2- Miteraka olana ato amin'ny firenena manampy trotraka ny krizy andalovan'ny firenena 3- Mirotaka, manao herisetra, ary manao fihetsiketsehana tsy nahazo alalana 4- Famoteahana zavatr'olona, manakan-dalana, ary mamelon'afo amin'ny fananam-panjakana sy fananan'olo-tsotra 5- Mampidi-doza ain'olo-tsotra 6- Midaroka mpitandro ny filaminana 7- Manimba fiara mpamonjy maratra sy mitora-bato azy ireny sy ny mpitandro ny filaminana.